Isu tinonyora yedu yekusarudza yeakanakisa Sony Xperia mafoni emafoni aunogona kutenga mu2017, kubva kubhajeti Sony nharembozha kune akanyanya akanyanya flagship Xperia nhare. Uye isu zvakare tinofumura chero mafoni eSony ayo anofanirwa kuvhurwa gare gare gore rino kana kutanga kwa2018.
Sony ndeimwe yevanogadzira mafoni epasirose parizvino, ichivhura nyowani nyowani dze Xperia. Gore rega. Nehunyanzvi hwavo, dhizaini dhizaini, yakakomba midhiya chops uye indasitiri-inotungamira kamera tech, Sony Xperia mafoni ndidzo dzakanakisa nharembozha dzaunogona kutenga kuUK. Iwe unogona kunyange kutora mamwe akasimba mabhajeti evhoti kubva kuna Sony, kana chikwama chako kana chikwama chikasatambanudzira kune chishandiso chekutanga.
Asi ndeapi akanakisa mafoni eXperia izvozvi? Heino sarudzo yedu yeboka, kuti ikubatsire kusarudza kuti ndeipi foni yaSony Xperia yakanakira iwe, pamwe nenharembozha nyowani dzaSony dzichiri kuuya muna 2017. Uye tarisa edu yakanakisa bhajeti Sony mafoni ficha yekutarisa kune anodhura kwazvo mafoni eXperia izvozvi.
Vhidhiyo: Best Sony Xperia mafoni muna 2017
Ongororo Yedu: Sony Xperia XZ Premium ongororo
Kana iwe uri mushure meinotakurika midhiya muhomwe chikara uye chikwama chako chakaturikwa, nhau dzakanaka: iwe watowana yako yakakwana Xperia. Iyo Sony Xperia XZ Premium ndiyo yepasi rose 4K HDR smartphone, ichipomba zvine mbiri kupenya uye zvakanyanya kuona zvinoonekwa. Nerutsigiro kubva kune anodikanwa eAmazon Prime Vhidhiyo neNetflix iri kuuya muna2017, unogona kunakidzwa nekutamba kwemabhaisikopo kunoshamisa pakufamba kwako kwezuva nezuva.
Iyo XZ Premium iri kure nefoni-yekunyepedzera foni, zvakadaro. Iyi nhandare yemitambo ichangoburwa Qualcomm Snapdragon 835 processor, imwe yemasimba emagetsi epamhepo chipets. Kuita kuri kukurumidza zvekuti maoko edu anenge ane blist, nepo kubatana kuchizadzikiswa mune ramangwana.
Sezvinongoyevedza ndeye Sony yazvino Motion Ziso kamera, iyo inogona kutora yakazara-yakazara uye chaiyo mifananidzo pamwe nekushaya-shaya Super Slow Motion vhidhiyo vhidhiyo. Tarisa uone zvizere Xperia XZ Premium kamera ongororo yemasampuli uye rumwe ruzivo.
Ongororo Yedu: Sony Xperia XZ1 maoko-pane ongororo
Iyo Xperia XZ1 ndeye Sony yazvino mureza ruoko, ichangobva kutangwa pa IFA 2017, uye imwe yeatinofarira mafoni kubva kuJapan hofori kusvika ikozvino.
Iyo XZ1 iri mhando yeakajeka musanganiswa wegore rapfuura Xperia XZ (ona pazasi) uye inozorodza Xperia XZ Premium. Nepo kutaridzika uye kunzwa kuchizozivikanwa kune varidzi veXZ, iwe unowana zvimwe zveakanakisa maficha kubva kune ane simba Premium modhi yakarongedzwa mukati meXperia XZ1. Izvo zvinosanganisira HDR vhidhiyo rutsigiro (kunyangwe iwe usingawani Ultra HD resolution yekuona pano) uye inopenya MotionEye kamera, izere neiyo yakanakisa Super Slow Motion modhi.
Ramba wakashongedzerwa kune yedu-yakadzika Xperia XZ1 ongororo uye tarisa yedu Xperia XZ1 matipi uye madhiri anotungamira nokuti zvimwe info.
Price: £ 500 (TBC)
Ongororo Yedu: Sony Xperia XZ kuongorora
Yakakura foni yaSony ya2016 yaive iyo Xperia XZ, yepamberi nhare mbozha inodada iyo ichine simba-Snapdragon 820 processor. Inonakidza nippy uye inotaridzika kunge yakanaka, asi dhirowa chaiyo ndiyo smart-smart 23-megapixel kamera iyo Sony yakarova kumucheto kumashure.
Iwe unowana laser-inotungamirwa autofocus uye yakavakirwa-mukati 5-axis yemufananidzo kudzikama, iyo yakabatana inokupa iwe inopinza, isina-pfuti isina-pfuti kunyangwe kana nyaya yako ichifamba kwese kwese nzvimbo. Iwe unogona zvakare kurekodha vhidhiyo inosvika kusvika ku4K UHD resolution, kune zvinonakidza zvakadzama mafirimu epamba.
Iwe unogona kutora iyo Xperia XZ mumitatu mitatu inotonhorera, pamwe nesango rebhuruu vhezheni iri yedu yatinofarira. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsikagarika zvepa mobile uye uine mari yekusiya iyo XZ sarudzo yakasimba, kunyangwe hazvo mamwe mabhegi emamwe moolah iwe iri nani zviri nani XZ Premium (ona pamusoro).
Ongororo Yedu: Sony Xperia X Ongororo
Iyo Xperia X inyowani yepamberi senge iyo Xperia Z5, iine mashoma mashoma ekucheka kudzikisa mutengo uye pasi pemakwikwi emakwikwi seye Galaxy S7. Kwakave nekushomeka kwemvura dhizaini uye iwe unowana isina kusimba processor kana ichienzaniswa neakawanda eprimiyamu 2016 mafoni, asi yakanakisa-mu-kirasi kamera ichiri mubhodhi uye X's selfie cam inonyanya kushamisa - tarisa yedu Xperia X kamera kuongorora nokuti zvimwe info.
Isu tinodawo yeyakanaka nyowani yakabatana dhizaini, iyo inoona ako desktops anoenderana neiyo Xperia X yekunze (kana, kuisa neimwe nzira, maketeni anozopedzisira aenderana iwo machira).
Check out kwedu Sony Xperia X hub yeongororo, magwara uye kuenzanisa.
Ongororo Yedu: Sony Xperia XA1 ongororo
Yegore rapfuura Xperia XA zvaisiririsa zvishoma uye zvishoma nezvishoma, kunyangwe iyo inoshamisa uye yakanaka dhizaini. Nekutenda Sony yakanyatso kugadzirisa pamwe neiyo 2017 sequel, iyo Xperia XA1.
Iyi foni inounza inodiwa-yakawanda yekusimudzira yekuita uye yakajairwa specs kusimudzira, kune inogutsa yezuva nezuva chiitiko. Nekutenda Sony haina kubvambura iyo yakanaka kumucheto-kune-kumucheto skrini, pachinzvimbo ichisarudza kuichenesa nemamwe akakomberedzwa mitsara uye iyo Xperia XZ's flat kumusoro uye pasi kupedzisa.
Hupenyu hwebhatiri hwakawedzerwawo, saka unogona kutarisira kana zuva nehafu yehupenyu pakati pemhosva. Nekudaro, chinonyanya kunakidza chimiro chitsva chekamera tech. Iyo 23-megapixel yekumashure kamera ndeyechokwadi yakasarudzika yemutengo poindi, inobata chaiyo, yakazara-yakazara mapikicha ayo anopenya chaizvo. Tarisa uone yedu yakadzika Xperia XA1 kuongorora kamera kana iwe usingatendi isu.
Sony Xperia X Yakajeka
Price: £ 400 (TBC)
Ongororo Yedu: Sony Xperia X Kuongorora kwakakwana
Kana iwe uri fan of dinky handsets, iyo nyowani Xperia X Compact inofanira kunge iri munzira yako. Iyi mini nhare inorongedza akawanda ezere akakura saizi X X maficha, asi yakapunzikira pasi mune inotakurika fomu 4.6-inch fomu. Iwe unowana inopenya, yakajeka skrini, yakafanana yakanakisa 23-megapixel kamera seyemureza Xperia XZ (kubvisa 4K vhidhiyo yekurekodha), uye sensor yeminwe yekumusoro kuti uzarure mudziyo.
Hupenyu hwebhatiri chinhu chakakomba chakasarudzika, ichipa padyo nemazuva maviri enguva yekutamba pakati pemitero. Uye nepo Xperia X Compact isingazvirumbidze simbi yesimbi dhizaini senge izere saizi yefoni yaSony, iyo 'mhute bhuruu' modhi inonyanya kukwezva.
Check out kwedu Xperia X Yakabatana vs Xperia X enzanisa kuti uone kuti musiyano uripi pakati pemafoni maviri X. Kune zvakare kwedu Xperia X Compact vs Xperia Z5 Yakabatana enzanisa, kuti uone kuti iyo nyowani nyowani nhare inokwira ichipesana negore rapfuura dinky Sony blower.
Ongororo Yedu: Sony Xperia Z5 ongororo
Yakapfuura nharembozha yaSony pamberi peXperia XZ yaive imwe yeiyo akanakisa mafoni eApple a2015 uye inogona kutorwa pamwe neakawanda chikwama-chinoshamisira mutengo tag mazuva ano.
Kutanga, iro girazi rakasvibira girazi dhizaini rakanakisa (kunyangwe riine kusimba, saka chenjera) uye usabatike nemvura zvakakwana, kupona kudonha mumabhati ekugezera uye zvimbuzi. Iyo Xperia Z5 inoshandisa foni zvine hushamwari zvakare, ichipa hupenyu hwakasimba hwebhatiri (zuva nehafu pamutero zvakajairwa) uye yakanaka 5.2-inch Yakazara HD skrini.
Iyo Xperia Z5's kamera ichiri akavimbika kwazvo 23-megapixel snapper futi, zvisinei nezera rayo. Tarisa uone yedu Xperia Z5 vs yakanakisa yezororo rese kamera kana iwe usingatendi isu.
Verenga yedu yakazara yekutanga Sony Xperia Z5 ongororo uye tarisa yedu kwenguva refu Xperia Z5 ongororo kuti tione zvataifunga nezveZ5 mushure memwedzi mitatu izere yekutamba.
Ongororo Yedu: Sony Xperia Z5 Compact kuongorora
'Mini' vhezheni dzenhare dzinowanzo kuve mimvuri yehama dzavo hombe, ine yakadiridzwa-pasi maspec uye zvinyoronyoro crap maficha. Asi iine 4.7-inch Xperia Z5 Compact, iwe unowana iyo chaiyo yakafanana inotyisa kamera, inoyevedza HD kutaridzika uye inoteerera yeminwe yekunzwa sensor yeiyo hombe Xperia Z5.
Asi chikamu chakanakisa ndechekuti, yakafanana yakakura Sony Xperience (ndine hurombo, joke rakajeka) rakadzikira pasi kuva rakanakisa, rinonakidza diki furemu, iro rave nyore kwazvo kushanda neruoko rumwe. Nechikonzero ichocho, isu tinokurudzira zvikuru iyo Xperia Z5 Compact (izvo zvinongoitikawo kuva zvishoma inodhura). Uye kusiyana neiyo nyowani X Compact, iyo Z5 Compact inonyatsodzivirira mvura.
Mazuva ano iwe unogona kutora iyo Z5 Compact yepasi pe £ 300 futi, izvo zvakakodzera kuti zvive.
Verenga zvakakwana Sony Xperia Z5 Compact kuongorora uye vedu kwenguva refu Xperia Z5 Compact kudzokorora-kuongorora mushure memwedzi mitatu izere yekushandisa. Uye tarisa kuti Z5 Compact inokwana sei kune mamwe mafoni mafoni mune yedu akanakisa macomputer mafoni.
Ongororo Yedu: Sony Xperia Z5 Premium ongororo
Kana iwe uchinyatsoda kutaridzika kweXperia XZ Premium uye kuratidzwa kwayo kwe4K asi usingakwanise kuwana mutengo wakakura wekubvunza, iyo Xperia Z5 Premium inogona kunge iri foni yaSony yako.
Ichi chikara che5.5-inch chakazvirumbidza yekutanga 4K foni yefoni, iyo ingaite senge inoshamisira kana ichienzaniswa neiyo Yakazara HD inoratidzira pane mamwe mafoni emahara eSony. Zvisinei, nhau dzakanaka ndedzekuti pane izvozvi yakawanda ye4K zvemukati kufambisa kuburikidza nemasevhisi akadai seNetflix, saka zvirinani kuti iwe ugone kushandisa iyo Ultra HD pani. Uyezve, mutengo weZ5 Premium wauya pasi izvozvi, uchiita kuti utengeke.
Iwe zvakare unowana iyo imwechete-inesimba-kamera kamera seXperia Z5, iyo inogona kutora yakadzama mapfuti mune chero mamiriro, uye nekupfura 4K vhidhiyo - iyo zvechokwadi iwe yaunogona kutarisa kumashure mukubwinya kwayo kwese ipapo ipapo paPrimiyamu skrini. Kuita kunovimbika ndiko kumwe kusimudzira, kunyangwe hupenyu hwebhatiri husina kusimba seyaZ5 yekutanga.
Verenga vedu zvakadzika Sony Xperia Z5 Premium 2016 ongororo kuti tione zvatinofunga nezveichi 5.5-inch chikara gore rakazara mushure mekumisikidzwa kwayo, pamwe nekuenzanisa kwazvakaita nevakwikwidzi vakaenzana saiyo OnePlus 3.
Ongororo Yedu: Sony Xperia E5 ongororo
Iyo Xperia E5 ndiyo yakachipa kwazvo 2016 Sony foni pane ingori £ 99. Kunyangwe izvi zvinorongedza angangoita akafanana macomputer seXperia XA uye imwecheteyo inoyevedza desktop ruzivo zvakare. Muchokwadi, iyo Xperia E5 chaizvo inodada nekutsetseka kuita uye hupenyu huri nani hwebhatiri, kunyangwe iyo 13-megapixel kamera iri yakakosha uye yakanyanya kushandiswa chete kune yakapusa, inogoverwa mapfuti.
Ongororo Yedu: Sony Xperia L1 kuongorora
Iyo yazvino inodhura kuwedzera kune iyo Sony Mobile mutsara-up ndeye Xperia L1. Ichi kukosha ruoko chinopa icho chinodiwa Sony dhizaini, chiyeuchidzo chemafoni eprimiyamu kune yakaderedzwa zvakanyanya £ 150 yekubvunza mutengo.
Mune dzimwe nzvimbo iyo Xperia L1 inosara kumashure kwevamwe vanokwikwidza-mutengo vakakwikwidza senge Moto G5, kunyanya kana zvasvika pakuita. Isu takanga tichitarisira akasimba optics kubva pafoni zvakare. Zvakadaro, iyo inokwanisa screen, inowedzerwa kuchengetedza uye mushandisi-inoshamwaridzika interface inosangana kune inogutsa yezuva nezuva chiitiko
Release Date: Kukadzi 2016 (UK)
Ongororo Yedu: Sony Xperia M5 Ongororo
Sony yakagadzirisa iyo Xperia M4 Aqua yegore ra2016 neM5 uye iko kugadzirisa munzira dzese dzinofungidzirwa. Dhirowa hombe yeM5 ndiyo inouraya kamera ruzivo. A mid-ranger ane 21.5-megapixel yekumashure snapper uye 13-megapixel kumberi-kumeso haina kuzwiwa, kunyanya kana iwe uchigona zvakare firimu mu4K. Tarisa uone yedu M5 kamera kuongorora pano.
Iyo M5 inouyawo neanouraya kutaridzika zvakanaka, iyo yakazara HD inoratidzira, NFC, 4G LTE, IP65 / 68 inodzivirira mvura, PlayStation kusangana uye inowedzeredzwa yekuchengetedza kusvika ku200GB. Kwete zvakaipa kune sub- £ 300 ruoko.
Verenga zvakakwana Sony Xperia M5 ongororo.
Yakanakisa mafoni eSony Xperia achiri kuuya muna2017
Sony Mobile inotanga kuvhura mafoni emafoni akati wandei mukati megore, kusanganisira imwe kana maviri matsva emidziyo uye mamwe epakati-renji mafoni uye mafoni anodhura. Tichiri kuzoona kuburitswa kweUK kwemafoni akati wandei akatoburitswa pane anofarira IFA 2017, saka unogona kutarisira kuti izvi zvinosvika muzvitoro mukupera kwegore.
Heano kutenderera kwedu kweakanyanya runyerekupe mafoni eSon anouya gare gare gore rino.
Ongororo Yedu: Sony Xperia XZ1 Yakabatana maoko-pakuongorora
Iwe uchazoziva kana iwe waverenga kusvika pano kuti isu tiri vateveri vakuru veSony's Compact mafoni, ayo anopa zvimwe kana zvishoma iwo akafanana maficha uye maficha evamwe vavo vakuru, mune inonakidza dinky uye inonakidza fomu. Zvakanaka, iyo Xperia XZ1 Compact haina kumbosiyana, uye ichinyanya kukwezva kupfuura yakajairwa XZ1 iyo yakavakirwa pairi.
Pakungoita 4.6-inches, iyi ruoko rune mavara ruri nyore kubata uye kutamba neruoko-ruoko. Iwe unowana kuzara kwemvura kuzere, inoyevedza kwazvo IPS skrini, ine simba Snapdragon 835 chipset, uye Sony iri nani kwazvo MotionEye kamera zadza neSuper Slow Motion vhidhiyo yekutora. Zvinhu zvinoshamisa.
Gara wakashongedzerwa kune yedu-yakadzika Xperia XZ1 Compact ongororo.
Release Date: Zuva 2017
Ongororo Yedu: Sony Xperia XA1 Plus maoko-pane ongororo
Iyo Xperia XA1 Plus inguva nyowani-yakakura saizi yepakutanga Xperia XA1 nharembozha, ino nguva inozviratidzira yakakura 5.5-inch kuratidza pamwe nebheteri rakakura. Izvi zvinoreva kuti inofanirwa kunge iri sarudzo yakasimba kune vese vateveri vezvenhau vanofarira kuona yakawanda mashoo kana mabhaisikopo ari kufamba.
Isu takanyatsonakidzwa neyakareruka mushandisi ruzivo, yakanakisa kamera tech uye hupenyu hwakareba hwebhatiri reiyo yakajairwa Xperia XA1, saka isu tinofara chaizvo nezve kubatanidzwa neiyi Plus vhezheni.
Parizvino hatina yakatarwa UK mutengo weiyi nhare, kunyangwe isu tiri kutarisira izvi zvichaburitswa munguva pfupi iri kutevera. Ramba wakarongedzwa kuongorora kwedu kwakadzika.
Ongororo Yedu: Sony Xperia X2 Ongorora
Sony's Xperia X2 ine mashoma mashoma ekugadzirisa nefoni yekutanga, kuitira kuti inyatso kuuraya rufu kumakwikwi anokwikwidza seSamsung Galaxy A5 uye OnePlus 3T. Kutanga, pane mutengo wemutengo. £ 450 yaive yakawandisa kuti ubvunze iyo yekutanga Xperia X, nepo zvaifarirwa neOnePlus foni zvichidhura zvishoma uye zvichipa kushanda kwakanyanya.
Nekudaro, iyo Xperia X yakawana zvinhu zvakawanda nemazvo, kusanganisira iyo yakanakisa dhizaini, inoyevedza screen uye anovimbika makamera. Saka isu tatova netariro yekuti inotevera Xperia X Series foni ichafadza, ichipa mutengo wacho uri chaizvo.
Vhidhiyo: Best Sony Xperia mafoni aunogona kutenga muna 2017
Haudi kuverenga mazwi? Hapana kunetseka. Heano mavhidhiyo edu kutenderera kweakanakisa mafoni eSony Xperia aunogona kutenga izvozvi.
Sony Xperia XZ1 vs XZ1 Compact: Zvishoma kana zvakakura, ndeipi iri nani?
Sony Xperia XZ1 vs XZ1 Compact vs X1: Sony itsva 2017 mafoni achienzaniswa
Sony Xperia XZ1 Compact vs X Compact: Kukwirisa kwakakomba, munzira dzese
Sony Xperia Pro-I ongororo: Kuchinja kwemifananidzo pane zvese zvinodhura